‘विप्लव’प्रति सरकार कडा, गोली हान्न निर्देशन
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द समुहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सत्तारुढ नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्णय गर्नुअघि सरकारले पार्टीका मूख्य नेताहरुसँग छलफल नगरेको भन्दै उनीहरुले यस्ता
मन्त्री फेर्ने सरकारको तयारी, कुन मन्त्रीकाे प्रगति विवरण कमजाेर ?
काठमाडौं । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले अनलाइनमार्फत गरेको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी मन्त्री कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएपछि
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति सवारीमा १३ वटा कारगेड मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । प्रतिएक आधा करोड रुपैयाँ हाराहारी मूल्य पर्ने १३ वटा मोटरसाइकल राष्ट्रपतिको सवारी स्कर्टिङ (कारगेड) मा प्रयोग हुँदै
अर्जुन थपलिया काठमाडौं । नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि सुविधा थप गरेको छ । सरकारले आवास निर्माणलगायतमा भूकम्पपीडितलाई सुविधा थप गरेको हो ।, आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्को २१ माघमा बसेको बैठकले
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण मोडालिटीबारे छलफल र बहस जारी रहेका बेला उपयुक्त विकल्प नआए सरकार आफैँले आयोजना अघि बढाउने भएको छ । नेपाल इञ्जिनीयर्स
‘रेलको टिकट काट्न आउनुस्’
तीर्थ न्यौपाने काठमाडौं । सरकारविरूद्द भइरहेका विभिन्न टिकाटिप्पणीप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कडा जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आइतबार बिशेष सम्बोधन गर्दै मुलुक समृद्ध पर्ने सपना गलत नभएको बताउनुभयो
सरकारलाई राजपाको यस्ताे चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ । राजपाले पहिल्यैदेखि संविधान संशोधन नभए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको छ । बारम्बार त्यस्तो चेतावनी
सरकारको समर्थन फिर्ता या कायम !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरुबीच छलफल हुँदैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने छलफल बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको छ
जनताले वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए । हुँदो हो त ३ हजार राखेर २ हजार रुपैयाँ प्रधानमन्त्रीको ‘पानी जहाज किन्ने सपना’मा शेयर हालिदिन्थे । तर त्यही